Tsy Maintsy Manambady ve ny Olona vao ho Sambatra? | Valim-panontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bicol Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Milaza ve ny Baiboly fa tsy maintsy manambady ny olona iray vao ho sambatra sy ho afa-po amin’ny fiainana? Raha dinihina maimaika fotsiny izay lazain’ny Baiboly, dia toa marina izany.
Nilaza Andriamanitra ao amin’ny Genesisy 2:18 fa “tsy tsara raha irery” i Adama. Namorona an’i Eva ho “famenony” àry Andriamanitra. Izay zavatra entina mameno ny banga no atao hoe ‘fameno.’ Raha io andinin-teny io no jerena, dia hoatran’ny hoe hisy banga foana amin’ny olona iray raha tsy manambady izy. Misy tantara maro hafa koa ao amin’ny Baiboly mampiseho fa mahafaly sy mahasambatra ny manambady. Ohatra iray amin’izany ny tantaran’i Rota.
Tsy maintsy manambady aman-janaka tokoa àry ve ny Kristianina vao ho sambatra sy ho afa-po ary tsy hisy banga eo amin’ny fiainany? Tsy izany mihitsy. I Jesosy Kristy no olona afa-po indrindra hatramin’izay sady tsy nisy banga mihitsy ny fiainany. Tsy nanambady mihitsy anefa izy mandra-pahafatiny. Izy koa no olona faran’izay nahay sady nanahaka tanteraka an’i Jehovah, “ilay Andriamanitra falifaly.” (1 Timoty 1:11; Jaona 14:9) Nitanisa zavatra maromaro tena mahasambatra i Jesosy. (Matio 5:1-12) Tsy nanonona ny fanambadiana anefa izy tamin’izany.
Midika àry ve izany fa mifanohitra ny zavatra lazain’ny Baiboly momba ny fanambadiana? Tsy izany mihitsy. Mila jerentsika aloha ny antony namoronan’i Jehovah ny fanambadiana. Marina fa nataony hahasambatra sy hahazoana namana akaiky ary tambitamby ny fanambadiana. Nilaina koa anefa izany mba hanatanterahana ny fikasany sasantsasany. Tian’Andriamanitra ‘hanana taranaka’, ohatra, i Adama sy Eva, ary ‘hihabetsaka ka hameno ny tany.’ (Genesisy 1:28) Tsy afaka nanao izany samirery anefa na i Adama na i Eva. Samy nila ny andaniny ny ankilany, ary tena nifameno izy ireo.
Toy izany koa ny fikasan’i Jehovah momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana teo amin’ny firenen’Israely fahiny. Tiany ho lasa be dia be izy ireo mba tsy ho resin’ny fahavalony. Tiany ho teraka avy tamin’ny taranak’i Joda koa ny Mesia, izay hanavotra ny olona amin’ny ota sy ny fahafatesana. (Genesisy 49:10) Lasa nihevitra àry ny vehivavy israelita fa voninahitra be ny manambady aman-janaka. Nahatsiaro ho afa-baraka sy nalahelo kosa izay tsy mba nanana.
Ahoana kosa ny amin’izao? Tsy voatery manambady sy miteraka ny Kristianina satria tsy asain’Andriamanitra ‘hameno ny tany’ intsony izy ireo. Ny tany rahateo efa feno olona. (Matio 19:10-12) Tsy mila miaro ny razamben’ny Mesia Mpamonjy intsony koa Andriamanitra, na miaro ny firenena niaviany. Ahoana àry no tokony hiheveran’ny Kristianina ny hoe manambady sy ny hoe mpitovo?
Samy fanomezana avy amin’Andriamanitra ireo. Mety ho tsara kokoa amin’ny olona sasany ny manambady, fa ny sasany kosa sambatra sy afa-po foana na dia mpitovo aza. Masina ny fanambadiana ary hahazoana fitiavana sy namana akaiky sady mahatonga ny fianakaviana ho mafy orina. Milaza koa anefa ny Baiboly hoe “hanam-pahoriana amin’ny nofony”, izany hoe hiatrika zava-manahirana ny olona manambady eto amin’ity tontolo ratsy ity. Tsy heverin’i Jehovah ho afa-baraka na mampalahelo kosa ny olona mijanona ho mpitovo. Milaza aza ny Teniny fa mahazo tombony kokoa ny mpitovo raha oharina amin’ny manambady.—1 Korintianina 7:28, 32-35.
Tsy manery ny olona hanambady na hijanona ho mpitovo mihitsy àry ny Baiboly. I Jehovah no Mpamorona ny fanambadiana sy ny fianakaviana, ary tiany ho sambatra sy ho afa-po ny olon-drehetra, na manambady izy na tsia.
Hizara Hizara Tsy Maintsy Manambady ve ny Olona vao ho Sambatra?